Sida loo sameeyo loox sheeko | Hal-abuurka khadka tooska ah
sida loo sameeyo sheeko sheeko
Si aad u sheegto sheeko wanaagsan, marka hore waa inaad qorsheysaa, waa mid ka mid ah wejiyada ugu muhiimsan si aad u hesho natiijo kama dambays ah oo wanaagsan, tanina waa inaad barataa sida loo sameeyo sheeko sheeko.
Waa mid ka mid ah aaladaha ugu badan ee loo isticmaalo aduunka duubista, kaas oo muuqaal walba si garaaf ahaan ah loogu matalo lagana gaaro duubis isku xiran.
Inaan haysano qoraal sawiran oo dhinacayada ah marka aan rabno inaan samayno mashruuc maqal muuqaal ah waa lama huraan, waa sababta aan ku bari doono sida loo sameeyo xaashi sheeko tallaabo tallaabo ah. Ma jiro xeer guud oo lagu sameeyo, oo dhammaantood isku mid maaha. Waxaan ku tusi doonaa mid ka mid ah moodooyinka ugu caansan.
Kahor intaanan bilaabin abuurista buug-sheekadeena, waa inaan ogaano waxa mid ka mid ah yahay oo aan ku siino xoogaa tilmaamo ah xaqiijintiisa.
1 Waa maxay buug sheeko
2 Talaabooyinka lagu abuurayo sheeko sheeko
3 Tusaalooyinka buug-sheekeedka
4 Qaababka Sheekooyinka
Waa maxay buug sheeko
Qalabka sheeko ama farsamada qoraalka garaafyada ayaa la sameeyay sanado badan. Waxay ku saabsan tahay a koox sawiro ama sawiro loo qaybiyay vignettes, kuwaas oo sameeya qoraal muuqaal ah, kaas oo muuqaalada lagu eegi karo Kaaso gadaal laga duubi doono.
Leeyahay Asal ahaan 30-meeyadii ee Walt Disney Studios, halkaas oo ay bilaabeen in ay u adeegsadaan si ay hal-abuurayaasha animation-ku hore ugu sii arkaan sida uu noqon doono filimku ka hor inta aan la duubin. Sawir-gacmeedyada ayaa lagu soo dhejiyay gidaarka istuudiyaha sidaas darteed qaab muuqaal ah fikradaha ku saabsan goobta la duubayo ayaa loo gudbin karaa.
Waa mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan marka la qorsheynayo duubista, ha ahaato filim, ganacsi ama shaqo shaqsiyeed. Ma aha qoraal, oo ay tahay in la raaco xarafka, ee waa a Hagaha hanuuninta muuqaalka iyo inta lagu jiro duubista isbeddelada ama wax ka beddelka ayaa la samayn karaa wakhtiga duubista ama tafatirka muuqaalada.
Talaabooyinka lagu abuurayo sheeko sheeko
Si aan u bilowno samaynta buug sheeko, waxa ugu horeeya ee ay tahay in aan haysano waa a qoraal qoraal ah halkaas oo nalagu sharaxay qorshayaasha ay tahay inaan sawirno.
Marka aan caddayno waxa ay qorshayaashani yihiin, waa in aan ku sawirnaa qoraalkayaga sheekada. Si tan loo sameeyo, si fudud waxaan u baahannahay meel aan ku shaqayno, xaashi ama buug xusuus qor ah iyo qalin wax lagu sawiro.
Marka la sawirayo qorshayaasha, ma aha lagama maarmaan in si aad u faahfaahsan, waanu samayn karnaa sawir-gacmeedyo degdeg ah oo qof walba fahmayo. Xusuusin muhiim ah ayaa ah in aysan muhiim ahayn in la ogaado sida loo sawiro si loo sameeyo sheeko sheeko, oo leh sawirro fudud oo waxa aan rabno in aan si cad u fahamno ay ka badan tahay in ku filan. Muhiim ma aha in la sameeyo sawirro leh dhammaan noocyada faahfaahinta.
Hoosta rasaasta, waad ku dari kartaa tilmaamo yaryar haddii aan rabno inaan ku darno tilmaamo kala duwan ee qaar ka mid ah faahfaahin gaar ah, odhaahyada jilayaasha, iftiiminta, dhaqdhaqaaqa kamaradaha, iwm.
Ma jirto wax ka fiican in la fahmo sida uu u shaqeeyo sheeko-sheeko marka loo eego in la arko tusaalooyin.
Qaar ka mid ah kuwa ugu caansan waa sheeko-sheekooyinka Disney studios, waxay ahaayeen kuwa farsamadan ku soo bandhigay istuudiyo filimo badan.
Dhexdooda waxaynu ku arki karnaa sida jilayaasha animation-kooda loogu sawiray mid kasta oo ka mid ah muuqaalkooda iyo xagga hoose ee qaar ka mid ah sawiradaas, sharraxaadda kooxda animation.
Ma jiro qof aan aqoon sheekadiisa Star Wars, ka hor inta aan duubista la bilaabin, agaasime-yaasheeda iyo kooxda filimka waxay haysteen warqad sheeko ah ee filimka u adeegi jiray hage markii la qaabeeyey muuqaalada.
Yaa aan ka naxin goobta qubeyska khuraafaadka ah ee filimka Alfred Hitchcock ee Psycho.
Waxa kale oo goobtan ku yaal boodhadh sheeko-sheeko ah, sida aad arki karto Qaar ka mid ah diyaaradaha ayaa ka duwan kuwa filimka asalka ah, iyo sida aan soo sheegnay, sheekadu waxay qirtay isbeddelada kuwaas oo badanaa la sameeyo inta lagu jiro marxaladda toogashada.
In Game of Thrones, mid ka mid ah taxanaha moodada ee sanadkan la soo dhaafay, sheekadu waxay ahayd lama huraan, mid kasta oo ka mid ah Muuqaallada la sawiray waxay ahayd inay ku jiraan dhammaan noocyada faahfaahinta ka hor inta aan la duubin.
Waxa jira habab kale oo lagu sawiro sabuuradaha sheekada oo aan gacanta ku sawirno, waana jaantusyada, ma jiro qaab qaabaysan oo qeexan, inta badan waxa loo qaabeeyey si la mid ah sabuuradda sheeko-gacmeedka.
El qaybta koowaad, waxay noqon doontaa macluumaadka qoraalka, kaas oo lagu daro macluumaadka isku xigxiga, meesha ay ka dhacdo oo aan xitaa ku dari karno lambarka bogga qoraalka aan tixraaceyno.
Qodobka xiga wuxuu noqon lahaa sanaadiiqda sawirida, waa meesha aan ku samayn doono masawirro ama waxaan dhigi doonaa sawirada, si aan u muujino sida isku xigxiga mashruuca duubista u socdo.
Marka xigta, waxaan ku dari doonaa a sharaxaad kooban oo ku saabsan faylalka, kaas oo aan ku qori doono shakiyada isku mid ah, sida dhaqdhaqaaqa kamarada, booska jilaa, iyo waxyaabo kale.
Ugu dambayntiina, xagga hoose ee template ka muuqataa qaybta indho-indhaynta, waa meel uu mas'uulka ka yahay qoraalka sheekada uu kaga tago faallo ku saabsan muuqaal gaar ah. Meeshani way kala duwan tahay iyadoo ku xidhan templateka aan isticmaalno, qaar way u muuqataa qaarna maaha.
Waxaan idiinka tagaynaa dhowr tusaale oo hab-raacyo ah si aad u aragto qaybaha kala duwan ee aan ka soo hadalnay.
Ugu dambeyntii, isticmaal qaab-dhismeedku wuxuu kaa badbaadiyaa dhibaatada sawiridda sanduuq kasta, ka dib oo dhan, inta kale ee tillaabooyinka waa isku mid labada hab.
Sabuurada sheeko-xariiradu waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan, haddaysan ahayn kan ugu fiican, ee loogu talagalay xirfadlayaasha ama hiwaayaddayaasha filimaanta, ee adduunka maqal-muuqaalka ah. Qalabkan, waxaan si fudud u helnaa hage si loo abuuro animation, filim ama boos.
Waxay noqon kartaa shaqo aad u adag, laakiin waa runtii faa'iido leh maadaama ay si weyn u caawineyso marxaladda ka horeysa duubista, iyada oo ay ugu wacan tahay in ay muujinayso sida tixdu u eegi doonto ka hor inta aan la soo saarin oo la ogaanayo waxa lagama maarmaanka u ah mid kasta oo ka mid ah tallaalkiisa haddii ay dhibaato timaadona la sixi karo ka hor inta aan la duubin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » sida loo sameeyo sheeko sheeko